करको चरित्र | Ratopati
मङ्गलबार ३ असार, २०७६ Tuesday, 18 June, 2019
personराजेन्द्र किराँती exploreकाठमाडौं access_timeअसोज ४, २०७५ chat_bubble_outline0
राज्यको मेरुदण्ड भनेको अर्थराजनीति नै हो । राज्य अङ्ग हो भने त्यसमा प्राण वा जीवन गति पैदा गर्ने माध्यम भनेको अर्थतन्त्र हो । यसले राज्यरूपी सुन्दर शरीरमा रक्तसञ्चार गराउँदै जीवन्तता प्रदान गर्छ । यही आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्गत राज्यले उद्योग, कलकारखाना, व्यापार वा व्यवसाय खोल्ने अवसर दिन्छ भने त्यसबापत जनताले केही अंश रकम राज्यलाई बुझाउनु पर्छ । यही खास रकमलाई नै अर्थशास्त्रीय भाषामा कर भनिन्छ । अर्थात, व्यापार व्यावसाय गर्नु र करको दायित्व पूरा गर्ने सिलसिलाकै दोहोरो अन्तरसम्बन्धमा राज्यको समग्र दैनिकी चल्दछ ।
सार्वभौमतः करको चरित्र राज्यसत्ताको शासकीय वर्गचरित्र अनुरूप हुनेगर्छ । सबै कर समान चरित्रको हुँदैन । यो पनि वर्गीय हुन्छ । न्यायिक र गैरन्यायिक हुन्छ । समान र असमान हुन्छ । प्रगतिशील र गैरप्रगतिशील हुन्छ । उदाहरणका लागि सामन्तवादमा तात्कालीन राजा महाराजाहरूले आफ्नो दरबारीय र भारदारीय ऐस आराम, भौतिक भोगविलास अनि सेवा सुविधाको लागि जनताबाट अतिरिक्त कर लिने गथ्र्याे । त्यस बेलाको कर प्रणाली राजा महाराजाहरूको तजबिजमा आधारित थियो । उक्त कर सामन्तवादलाई मलजल गर्ने रणनीतिमा तय गरिन्थ्यो । यस्तो करले जनताको हित नभएर चरम उत्पीडनलाई संस्थागत गर्छ । यसकारण सामन्तवादी कर प्रणाली प्रगतिशील थिएन ।
सामन्तवादपछि पुँजीवादको स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक पद्धति विश्व राजनीतिको मूल चरित्र बन्नपुग्यो । तर यसमा पनि करको चरित्र पूर्णरूपमा प्रगतिशील हुनसकेन । उनीहरूले पनि केही आफ्नो अभिजात वर्गीय ऐसआराम र सेवा सुविधा बढोत्तरीमा करको दुरुपयोग गरे भने केही विकास निर्माणमा खर्च गर्ने नीति ल्याए । वस्तुतः लोकतन्त्रमा निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुग्ने परिपाटी विकास भएसँगै शासकहरूको ध्यान एकाएक चुनावतर्फ गएको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले मतदाताको भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्न करको केही हिस्सा चुनावी प्रयोजनमा खर्च गर्न थाले । यसलाई बुर्जुवा वा लोकतान्त्रिक कर प्रणाली भनिन्छ । मूलतः यसमा पनि समाजमा विद्यमान विभेद, शोषण उत्पीडन अन्त्यमैत्री कर प्रणाली अपनाइएन । यसलाई लोकतन्त्रवादीहरूले सामन्तवादी कर प्रणालीभन्दा प्रगतिशील भनेर दाबी गरे । यद्यपि वर्गीय सारतत्वलाई नियाल्दा यो पनि उत्पीडित वर्गीय हितमा होइन, अभिजात वर्गीय स्वार्थ अन्तर्गतकै कर पद्धति हो ।
यता आजसम्मको सबैभन्दा प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको समाजवादी कर पद्धति नै हो । यसलाई प्रगतिशील कर प्रणाली पनि भनिन्छ । यसमा गरिब जनता र धनी जनता अनि धनी जनता र शासकहरू बीचको दूरीलाई न्यूनीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य हुन्छ । बहुसङ्ख्यक उत्पीडन र विभेदमा पारिएका जनताहरूको स्वार्थप्रति यो कर प्रणाली सहयोगी हुनेगर्छ । यो समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय दरारहरूलाई घटाउने रणनीतिमा तय गरिन्छ । आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थभन्दा सामूहिकता र समुदायगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । समाजको हेलाहोचोलाई अन्त्य गर्ने सङ्क्रमणकालीन कर प्रणाली हो । यो अझ न्यायपूर्ण र समानतामा आधारित समाज निर्माण हुन्छ । अर्थात समाजवादी अभीष्टमा अन्तरनिहित हुन्छ । तर बुर्जुवाहरूले कर अनन्तकालसम्म लगाउने कुरा गर्छ । ऐतिहासिक भौतिकवादी प्रक्रिया अनुरूप रूपान्तरित समाजको चरित्र अनुरूप यसको स्वरूप बदलिने गर्छ । अन्ततः साम्यवादमा कुनै पनि कर अस्तित्वमा रहँदैन ।
हालै नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रमा कर लगाएको छ । यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । ठूला साना सबै व्यवसायीहरूलाई एउटै नजरबाट करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ । सबैलाई करको दायित्वमा ल्याउनु सकरात्मक कुरा हो । तर समग्र व्यापार व्यावसायहरूलाई संस्थागत र सुदृढीकरण नगरी कर लगाउनु र बढाउनु अली हचुवाको निर्णय जस्तो देखिन्छ । यसमा कर लगाउने र करको विरोध गर्ने दुवै पक्षको कर सम्बन्धी दृष्टिकोणमा समस्या देखिन्छ । सरकार पक्ष कर लगाएर र बढाएर मात्र आर्थिक समृद्धि देखिरहेको छ । यो दृष्टिदोष र भ्रम नै हो । उता व्यवसायी र उद्यमीहरू राज्यलाई केही हिस्सा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा छैन । उनीहरू पनि जसरी पनि लिने वा कमाउने तर दायित्व वा कर्तव्य बोध गर्ने मनोवैज्ञानिक संस्कृतिमा देखिन्न । अर्थात यसप्रति वस्तुवादी बुझाइ नहुनु पनि समस्या हो ।
वस्तुतः सरकार पक्षको पनि यसमा कमजोरी रहेको छ । अर्थमन्त्री केवल प्राविधिक हलमा रुमल्लिएको देखिन्छ । तर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र उत्पीडनमा जकडिएको नेपाली अर्थराजनीतिमा कर लगाएर र बढाएर मात्र समस्याको बनिबनाउ समाधन खोज्नु अवैज्ञानिक हुन्छ । यो वस्तुवादी पहल र प्रयत्न होइन । किनकि नेपालमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध धेरै पछौटे रहेको छ । यस्तो परिवेशमा घोषणा गर्नेवित्तिकै कर संस्थागत हुनसक्दैन । किनकि नेपाली अर्थराजनीतिको फेसो धेरैतिर खुस्किएको छ । यसमा एउटा मात्र पक्ष जिम्मेवार छैन ।
यसका लागि सर्वप्रथमतः राज्यले राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माणमा नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा जोड दिनुपर्छ । उद्यमशीलता, सिर्जनशीलतासँगै रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्छ । न्यूनतम पनि हरेक नागरिकहरूको कुनै न कुनै रूपको व्यवसाय र रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले आम नीति घोषणासँगै कडाइपूर्वक योजनामा लागू गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, ठूला उद्योग कलकारखाना र घरेलु वा पारिवारिक कुटिर उद्योगहरू खोल्न राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आम औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको महाअभियानसँगै कर तिर्ने संस्कृति स्वतः संस्थागत हुन्छ । यो सार्वभौम नियम हो । तब मात्र राज्यले घोषण गरेको जुनसुकै किसिमको कर जनताले सहजै स्वीकार गर्नेछ । उद्योग कलकारखानाको विकाससँगै करको दायरा स्वतः फराकिलो हुँदैजान्छ ।
अर्कोतिर यसरी आकस्मिक र अनपेक्षित कर वृद्धिमा जनताको विरोध उठ्नु स्वभाविकै देखिन्छ । तर कर सम्बन्धमा जनताको पनि बुझाइमा समस्या रहेको छ । उनीहरू कर भन्नु वित्तिकै आतङ्कित हुनेगर्छ । आम जनतामा यस्तो मनोविज्ञान त्यतिकै आएको भने होइन । यसको लागि मूलतः वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको वर्ग चरित्र, पद्धति र प्रक्रिया पनि जिम्मेवार रहेको छ । वस्तुतः दलाल एकाधिकार पुँजीवादमा उपभोक्तावादी संस्कृति हावी हुन्छ । यस्तो संस्कृतिमा हरेक संस्था वा नागरिकहरू आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थमा रुम्मलिएको हुन्छ । आफूले वा आफन्तले पाउने, ग्रहण गर्ने र लिने कुराको भावनामा सिङ्गो मानवीय सोच चिन्तन र मनोविज्ञानहरू झाँगी रहेको हुन्छ । तेरोमेरो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाने नेटो काटेको हुन्छ । अरूले भन्दा आफूले वा आफन्तले बढी कमाउने वा उछिन्ने सोच पराकाष्ठमा हुन्छ । तब समाजमा गलत कर्मकाण्डहरू नाटकीय रूपमा बढ्नेगर्छ । यो हाम्रो समाजले पनि भोगिरहेकै पीडा हो । यस्तो बेला उनीहरूमा राज्यप्रति मेरो पनि दायित्व वा कर्तव्य हुन्छ भन्ने सोच असाध्यै रक्षात्मक हुनजान्छ । यसैको परिणामस्वरूप कर भन्नेवित्तिकै उनीहरूको कनसिरी तातिने गर्छ । एक किसिमको कर आतङ्कको मनोविज्ञानले घर गर्छ ।
मुख्यतया कर उठाउनुको उद्देश्य र यसले प्राथमिकतामा राखेको वर्गीय स्वार्थ र हितमा यसको प्रगतिशीलता अन्तरनिहित हुन्छ । सबै करको उद्देश्य बहुजन हितायको नीति वाक्य अनुरूप नहुन पनि सक्छ । किनकि कर पनि वर्गीय हुन्छ । तर पुँजीवादीहरूले करको वर्गीय सारतत्वलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ । यसले सर्वसाधरण जनतामा दिग्भ्रम पैदा गरेको छ । वास्तवमा वर्गविश्लेषणको आधारमा करको निर्धारण गर्नुपर्छ । तब मात्र यो न्यायिक र समान हुनेगर्छ । खास प्रगतिशील कर प्रणालीमा अति आवश्यकीय वस्तुहरूमा असाध्यै न्यून र विलाशी वस्तुहरूमा अधिकतम कर लगाइन्छ । त्यस्तै पुँजीपति वर्गलाई धेरै र श्रमजीवी वर्गलाई न्यून कर समायोजन गरिन्छ । अर्थात वर्गविश्लेषण र वस्तुविश्लेषण स्पष्टरूपमा गरिन्छ । राजामहाराजा र सभ्रान्तहरूको हितमा उठाइएको कर न्यायपूर्ण हुँदैन । तमाम बहुसङ्ख्य श्रमजीवी जनताको पक्ष र हितमा उठाइएको कर न्यायपूर्ण हुन्छ । यस्तो कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर भनिन्छ । अर्थात कर भनेको अझ उन्नत समाज, अझ उन्नत राज्यव्यवस्था, अझ न्यायपूर्ण र समानतातर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । आजको कर प्रणाली भोलिको कररहित अर्थराजनीतिक रामराज्य स्थापनाको गुरुत्वकेन्द्रतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
त्यसैले नेपालमा विद्यमान पछौटे उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धका कारण कर प्रणाली संस्थागत हुनसकेको छैन । यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा सिङ्गो मुलुकलाई औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । राज्यले सबैखाले नीतिगत, योजनागत, व्यवहारगत र प्राविधिक वातावरण तयार पानुपर्छ । सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई आम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात अर्को भाषामा भन्ने हो भने जनतामा आत्मनिरभरतासँगै क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन करको उद्देश्य र वर्गपक्षधरता स्पष्ट गर्नुपर्छ । सिङ्गो कर पद्धति विद्यमान विभेद, शोषण र उत्पीडनहरूको समूल अन्त्यतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । बुर्जुवाहरूको कर प्रणाली समाजमा झनै वर्गीय असमानता र विभेदको दरार वढाउने किसिमको हुन्छ । यसकारण करको वर्गचरित्र र अन्तरवस्तुमा तपाईं हामी स्पष्ट हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।
तसर्थ हामी समाजवादका अनुयायीहरूले कर प्रणालीलाई समाज विकासको ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तर्गतकै निरन्तर आन्दोलनको एउटा सिलसिलाको रूपमा लागू गनुपर्छ । यस्तो कर प्रणालीको उद्देश्य र वर्गीय चरित्रको सन्दर्भमा आम जनतालाई स्पष्ट पानुपर्छ । अझ उन्नत, न्यायपूर्ण र समानताको मूलभूत सिद्धान्तमा आधाति हुनुपर्छ । अर्थात समग्र कर प्रणालीको संयन्त्र समाजवाद हुँदै साम्यवादमा सङ्क्रमण गर्न सहयोगी हुनुपर्छ । यसलाई क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ । यो मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने सबैखाले हेलाहोचो, शोषण–उत्पीडन र विभेदहरूको साङ्गोपाङ्गो अन्त्यको रणनीतिक मिसनमा परिलक्षित हुन्छ । यस्तो करमा अन्तर्निहित सारतत्व समानता र न्यायमा आधारित हुन्छ । तब ठूला निगम हाउस, उद्योगी र व्यवसायीहरूले कानुनतः कर तिर्न बाध्य हुन्छन् । यता चटपटे, चाउमिन, केस काट्ने र पोलेको मकै बेच्नेहरूले पनि वर्गीय भावनात्मक अपनत्वसहित खुशी वा गर्वसाथ कर तिर्नेछ । यसकारण करको वर्गचरित्र निर्णायक सवाल हो ।
भारतका ‘अदृश्य’ प्रधानमन्त्री
बालकका पसिनामा मालिकको मस्ती
अहिलेको निराशाजनक अवस्था – ‘अधुरो क्रान्तिको पीडा’
छिमेक नीतिमा भारतको ठूलदाइपनः विमानस्थलमा अवरोध !
एक पानामा छाप ठोक्दा हजार पाना रातो !
मिडियाले पनि नियमनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ
वैदेशिक रोजगारः ११ महिनामा ५०२ को मृत्यु
जीवजन्तुका लागि पनि असह्य गर्मी
गुठी विद्येयकविरुद्ध स्टाटस लेखेपछि पाइलट लामा जापान जान पाएनन्
मंगलबार यी राशिका लागि छ शुभ
भारतीय जनता पार्टीमा आयो नयाँ नेतृत्वः जेपी नड्डा अबको ‘सुपर पावर’
इरानले आणविक सम्झौता उल्लङ्घन गरे प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ
भक्तपुरमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउने ३९ सवारी साधनलाई कारवाही
नेपाली स्याट–१ आकाशमा छाडियो
असारभित्र पहिलो किस्ता नलिए लाभग्राही सूचीबाट हटाइने
देशलाई थिलथिलो बनाएको काङग्रेसले होः भीम रावल